सरिता गिरीलाई नायिका नीताले भनिन् – ‘तिमी नेपालको लायक छैनौ’ ! ठिक भनिन् भन्ने जतिले लाइक अनि शेयर गर्नु होला । – Butwal Sandesh
सरिता गिरीलाई नायिका नीताले भनिन् – ‘तिमी नेपालको लायक छैनौ’ ! ठिक भनिन् भन्ने जतिले लाइक अनि शेयर गर्नु होला ।
काठमाडौं। भारतले अ’ति’क्र’मण गरेको लिपुलेकसहितको नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग उठिरहेको बेला जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भारतको पक्षमा अभिव्य’क्ति दिएकी छिन् । उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रमाण नभएको बताएपछि अहिले उनको चौतर्फी विरो’ध भइरहेको छ । उनले निरन्तर राष्ट्रिय हित र सीमानाको सुरक्षाविपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जतातै वि’रोध भइरहेको छ । उनले रा’ष्ट्रवि’रो’धी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै का’रवाहीको माग समेत गरिएको छ।
उनले दिएको अभि,व्यक्तिलाई अहिले सामाजिक सञ्जालभर वि’रोध गरिएको छ । यस्तै नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री नीता ढुंगानाले पनि गिरीलाई नेपालको लायक नभएको बताएकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नारीलाई आफ्नै माइती नै प्यारो हुने हुनाले उनले उतै राजनीति गर्दा राम्रो हुने बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन् – ‘हो नारीलाई आफ्नै माइती नै प्यारो हुन्छ । उतै गएर राजनीति गर्दा कसो होला ? तिमी नेपालको लायक छैनौ।’
जनता समाजबादी पार्टीकी नेतृ सांसद सरिता गिरीको घर घेरा,उ गरिएको छ । ४०÷५० जनाको समूहले उनको घर घे,राउ गरेर नारा जु,लुस लगाएको नेतृ गिरीले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेकि छन् । नेतृ गिरीले आफ्नो फेसबुक स्टाटस्मा रोमनमा ४०÷५० जनाको समूहले आफ्नो घर घेरा,उ हालेर नारा जुलुस गरेको कुरा पोष्ट गरेकी छन् । उनले आफ्नो घर अगाडी त्यसरी अ,परिचित समूहहरुले ना,रा जु,लुुस लगाएपछि पु*लिसलाई खबर गरेको पनि बताएकी छन् ।
उनले लेखेकि छन्,‘अहिले भर्खरै ४०÷५० जनाको समूहले मेरो घर घेरी ना*रा जु*लुस लगाई रहेका छन् । गेटको ताला पनि टुटाएका छन् । पुलिसलाई खबर गरेको छु । आशा गर्दछु पुलिस आउँछन् ।’ उनले आफुले आफ्नो घर घेरेर ना*रा जु*लुस गरेको थाहा पाएर प्र*हरीलाई खबर गरेको र प्रहरी आउने कुरामा आफुलाई विश्वास भएको कुरा पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
केहि दिन अगाडी सांसद सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा आफूले नेपालको नक्सामा कहिल्यै पनि नदेखेको बताएकी थिइन् । कालापानीमा ६० बर्षदेखि भारतीय सेना बसिरहेको बताउदै नेपाल, भारत र चीनबीचको सीमा निश्चित हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेकी सांसद गिरीले भारत र नेपालमा त दुवै सरकारले भनेअनुसार ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भैसकेको दावी गरेकी थिइन् ।
सुस्ता र कालापानीको अब २ प्रतिशत समस्या बाँकी छ,‘ यदि नेपालले नयाँ नक्साको बारेमा कुरा ल्याईरहेको छ भने त्यो पनि प्रमाण र सबुत त नेपालसँग हुनु पर्यो,२०५४ सालमा योगी नरहरीनाथले सर्वोच्च अदालतमा मु,द्दा गरेका हुन् ।
उनको दे,हान्त भईसक्यो । उनको माग के थियो भने सुगौली सन्धिअनुसारको सम्पूर्ण जग्गा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ ।’लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो नि, यसबारेमा नेपालसँग सबै प्रमाण छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले कालापानी मात्र किन ? हामी त्यो भन्दा अघि पनि ग्रेटर नेपाल, १८६० को सन्धिपछि लिम्पियाधुरा छैन् ।
लिम्पियाधुराको बारेमा वि,वाद छ । प्रधानमन्त्रीले स्वयम भन्नुभएको जवाफ दिनुभएको छ । लिम्पियाधुरा मैले नेपालको नक्सामा कहिल्यैपनि देखेको छैन् । यो विवादको सार के हो भने नेपालको भारतसँग कुनैपनि कन्फ्रन्टेशनको ईस्यु म चाहीँ देखिराखेको छैन् । कन्फ्रन्टेशन कहाँ छ ? भारत र चीनको बीचमा छ । र, नेपालले अहिले जुन लिम्पियाधुरासम्म लगेको छ । तल कालापानीमा भारतको सेना ६० वर्षदेखि बसिराछ । यी अभि*व्यक्ति उनले टेलिभिजन र अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेपछि अहिले नेपालीहरु आ*क्रोशित भएका छन् ।